Ny lahatsoratr'i Philip Kushmaro momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Philip Kushmaro
Philip Kushmaro, VP Operations ao amin'ny Ranky, teraka tany Canada tamin'ny raibe Commodore 64 Guru ary ray mankahala ny nomerika rehetra, izay nivoatra ho olona iray izay tsy hoe tia ny nomerika rehetra fotsiny fa tia manazava azy. Izy dia injenieran'ny rindrambaiko, matihanina IT voamarina amin'ny Microsoft, webmaster ary maro hafa. Nanapa-kevitra ny hamela izany rehetra izany izy indray andro mba hanitarana ny lafiny famoronana. Ny fanoratana momba ny zavatra halany dia tsy lasa fialamboly fotsiny. Rehefa tsy manao bilaogy na manao izay ataony ho an'ny asany izy dia ho hitanao amin'ny fiofanana gym ao MMA sy Breziliana Jiu Jitsu.
Ahoana ny fomba nahatonga ny data data lehibe ho lasa zava-dehibe ho an'ny DSP
Alatsinainy, May 8, 2017 Talata, May 9, 2017 Philip Kushmaro
Ny fanadihadihana angon-drakitra lehibe dia vato fehizoro ho an'ny drafitra marketing mahomby sy ny adtech efa an-taonany maro izao. Miaraka amin'ireo antontan'isa mba hanohanana ny hevitra momba ny fahombiazan'ny fanadihadihana angon-drakitra lehibe, dia mora ny manolotra ao anatin'ny orinasanao, ary mety hahatonga anao ho tsara ho olona nanoro hevitra azy aza. Ny fanadihadihana angon-drakitra lehibe dia manadihady data marobe (araky ny anarany) ary mamela ny mpandinika hampiasa an'io angona io